Ghana Vision 2020: Mpɔtam | Akan kasahorow
Anokwale by GhanaThink, Dwowda. Ɔbenem da 16, afe 2020 - Wukuda. Ɛbɔ da 1, afe 2021. 𓀠 388
Gaana ne awae hia bambɔ.
Sika kɔkɔɔ ne a ɛtutu, kuayɛ na dan bɔne sɛe kwae no.
Kuayɛ bɔne sɛe asaase no.
Anhwea ne a ɛtutu sɛe mpoano mbew.
Hwɛ sika kɔkɔɔ ne a ɛtutu so yie.
Nsu sɛe pira nyimpa na abowa.
#kwae #Gaana #hia #bambɔ #tutu #sika kɔkɔɔ #bɔne #kuayɛ #na #dan #sɛe #asaase #anhwea #mpoano #mbew #hwɛ ... so yie #nsu #sɛe #pira #nyimpa #abowa